မျက်စိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ - Hello Sayarwon
မျက်စိဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကင်မရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အာရုံသိမှတ်လက်ခံမှုနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓါရဲ့ ဟန်ချက်ကိုညီအောင် ထိန်းပေးပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို မျက်စိထဲမှရှိတဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ တည်ဆောက်ပုံတွေ (အချောင်း၊ ကတော့ခုံး၊ အမြင်လွှာ၊ မှန်ဘီလူးအပါအဝင်) ကနေ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
မျက်လုံးရဲ့ရှေ့ဘက်မှရှိတဲ့ မျက်ကြည်လွှာဟာ မျက်လုံးအတွင်းပိုင်းကို အလင်းရောင်တွေ ဝင်ရောက်စေပါတယ်။ အလင်းရောင်ဟာ သူငယ်အိမ်ကို ဖြတ်သန်းသွားပါတယ်။ သူငယ်အိမ်ဟာ မျက်လုံးအတွင်းကို အလင်းရောင် ဘယ်လောက်ပေးဖြတ်မလဲဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး အရွယ်အစားပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ မျက်လုံးရဲ့ သဘာဝမှန်ဘီလူးဟာ အလင်းရောင်တွေကို ချိန်ညှိနိုင်ဖို့ အကျဉ်းအကျယ်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးရဲ့မှန်ဘိလူးကို ဖြတ်သန်းသွားပြီးတဲ့အခါ အလင်းရောင်ဟာ ထူထဲပြီး ကြည်လင်တဲ့ အရောင်တွေရှိတဲ့ လုံးဝန်းတဲ့နေရာကို ဖြတ်သန်းပါတယ်။ ပြီးရင် အလင်းရောင်ဟာ အမြင်လွှာပေါ်က ပုံရိပ်ပြတ်သားအောင် လုပ်တဲ့နေရာကို ရောက်လာပါတယ်။ အမြင်လွှာဟာ ကင်မရာတလုံးမှာဆိုရင် ဖလင်နဲ့တူပါတယ်။ သူဟာ အလင်းရောင်တွေကို လျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုတွေ ဖြစ်သွားစေပြီး အမြင်အာရုံတွေကနေ ဦးနှောက်ဆီ ပို့ဆောင်စေပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ အမြင်အာရုံလက်ခံတဲ့နေရာကနေ အဲဒီလှုံ့ဆော်မှုတွေကို လက်ခံရယူပါတယ်။
ပုံမှန်မျက်ရည်မှာ ရေ၊ ဆီနဲ့ အချွဲဓါတ် ပါဝင်ပါတယ်။ မျက်ရည်ဟာ မျက်လုံးကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပြီး အမြင်အာရုံကောင်းစေဖို့ အရေးကြီးလှပါတယ်။ အညစ်အကြေး အမှုန်အမွှားတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ပုံမှန်မျက်ရည်စနစ်မှာ မျက်သားကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် စိုစွတ်စေပြီး အလွန်အကျွံစီးထွက်မလာအောင်လည်း ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ မျက်ရည်ထွက်တဲ့အပိုင်းမှာ ပြဿနာရှိပြီး နည်းနည်း ဒါမှမဟုတ် အများအပြားထွက်ရင် မျက်စိယားယံခြင်း၊ အမြင်အာရုံေဝဝါးခြင်း ဖြစ်စပေါတယ်။
လူ့မျက်စိမှာ ညအမြင်အာရုံအတွက် ဆဲလ်အချောင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒီဆဲလ်အချောင်းတွေဟာ တောက်ပတဲ့ အလင်းရောင်ကို ထိတွေ့အပြီးမှာ အမြင့်ဆုံး အာရုံခံနိုင်ခြင်းရရှိရေးအတွက် အချိန်ယူပါတယ်။ အမှောင်ကို ကျင့်သားရစေဖို့ နာရီဝက်အတွင်း၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်နာရီအတွင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ရက်နဲ့ချီ ကြာနိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ်အချောင်းတွေမရှိရင် လူတွေဟာ ညဘက်မမြင်နိုင်ပါဘူး။
မျက်စိရဲ့မှန်ဘီလူးဟာ အလင်းရောင်တွေကို အမြင်လွှာပေါ်မှာ စုဆုံစေပါတယ်။ ကင်မရာထဲမှာဆိုရင် ဖလင်နဲ့ တူပါတယ်။ မှန်ဘီလူးမှာ ပြသနာရှိရင် အကွာအဝေးတစ်ခုခုက ပုံရိပ်တွေကို ကြည့်မြင်ရာမှာ ေဝဝါးစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပြဿနာကို မျက်မှန်၊ မျက်ကပ်မှန်စတာတွေနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ကားမောင်းခြင်း၊ အရာဝတ္တုတစ်ခုခုကိုပစ်ခြင်း၊ ဖမ်းယူခြင်း စတာတွေအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ မျက်လုံးဟာ ကိုယ်ခန္ဓါရဲ့ ရှေ့ပိုင်းမှာရှိလို့ မြင်ရတဲ့နေရာ အနည်းငယ်ကွဲပြားပြီး တူညီတဲ့အရာတွေကို မြင်ရပါတယ်။ မျက်စိတစ်ခုချင်းဟာ အရာဝတ္တု ပတ်လည်ကို အနည်းငယ်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်စိများဟာ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပုံမှန်အရွယ်အစားတိုင်း မြင်နိုင်ရုံသာမကပဲ မိမိနဲ့ အရာဝတ္တုတွေရဲ့ ဆက်စပ်မှုကို သိမြင်နိုင်ပါတယ်။ အမြင်အာရုံေဝဝါးရင်တော့ ဒီစွမ်းဆောင်နိုင်မှု ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။
မျက်စိရဲ့ အမြင်အာရုံဟာ ဦးနှောက်ဆီကို မိမိကိုယ်ခန္ဓါနဲ့ တခြားအရာဝတ္တုတွေ ဆက်စပ်မှုကို သိမြင်နိုင်စေပါတယ်။ ဟန်ချက်ထိန်းညှိခြင်းဟာ ကောင်းမွန်ရင် အဆောက်အဦတွေနဲ့ အရာဝတ္တုတွေကို တည့်မတ်စွာ မြင်တွေ့နိုင်ပြီး လမ်းကိုတဖြောင့်တည်း လျှောက်နိုင်ပါတယ်။
Eye anatomy and function. http://www.aboutkidshealth.ca/En/HealthAZ/HealthandWellness/EyeandEarCare/Pages/Eye-Anatomy-and-Function.aspx. Accessed in February 24, 2017.
Functions of the eye. http://www.myeyes.com/functions-of-the-eye.shtml. Accessed in February 24, 2017.
The main functions of the eye. http://www.livestrong.com/article/92670-main-functions-eye/.Accessed in February 24, 2017.
How does the human eye work? https://www.nkcf.org/about-keratoconus/how-the-human-eye-works/.Accessed in February 24, 2017.
Human night vision. http://modernsurvivalblog.com/security/human-night-vision/. Accessed in February 24, 2017.